Uruurinta Gabdhaha Ugu Gabdhaha Ugu Gabdhahafiican Wakiilka | Ragga Stylish
Sawirka meeleynta Carlos Rivera | | nololeedka
'Classics', tani waa cinwaanka ururinta ugu dambeysa Agent Provocateur, Shirkada Ingriiska ee ku takhasustay dharka haweenka. Ma awoodno inaan iska caabinno inaan idinla wadaago waxaas aan la midka ahayn xulashada galmada, sawirada dareenka leh oo leh bar calaamadeysan oo ah erotic. Shaki la'aan, cudurdaarka saxda ah ee ku raaxeysiga dheddigga quruxda badan leh sawirradan xunxun laakiin lagu soo bandhigay dhadhan fiican.
Buug-gacmeed lagu rakibey xaraarad galmo oo kicin doonta damacyo badan. Ha seegin xulashooyinkaan in ka badan sawirro dhiirrigelin ah oo aan waxba ka hinaasin bandhigyada qarsoodiga ah ee qarsoon ee Victoria.
Magacan oo u horseedi kara khiyaano, 'Classics', guriga dharka hoosta ayaa bilaabaya tifaftirkaan si loogu soo bandhigo ururintan ka tirsan khadka joogtada ah Wax sida a xulashada dharka hoosta haweenka. Qaar badan oo iyaga ka mid ah maaha wax caam ah, taas oo ah, kama hadlayno oo keliya wax ku saabsan surwaal dhaqameedka iyo rajabeetooyinka, way ka fog yihiin. Iyo, xulashada ballaaran ee qaybaha waxaan ku aragnaa qaabab kala duwan iyo isbeddellada dharka, laga bilaabo soojeedino jacayl badan maraya lebbisyo dareen leh oo aad u badan dominatrix. Shirkaddu waxay xaqiijineysaa in soo-jeedintan ay soo bandhigeyso qeybaheeda ugu waqtiga yar iyo kuwa caadiga ah, oo ah wax lala yaabo sababtoo ah geesinimada badan ee lebbiska aan aragno, qaarkoodna ay yihiin kuwo kooban sida ay u yihiin galmo.
Sawirradu waxay soo gudbinayaan casriyeyn iyo waxyaabo aad u kacsan, haa, oo lagu soo bandhigay fasal aad u fiican iyo xarrago. Layaab malahan, qofka masuulka ka ah sawir qaadista moodooyinkan quruxda badan iyo kuwa cajiibka ah ma jirin cid kale oo ka weyn Ellen von unwerth, Sawirqaade Jarmal ah iyo agaasime hal abuur leh ku takhasusay sawirka galmada kacsi leh. Iyadu, way iska dhigeen moodooyinka ugu sarreeya sida Claudia Schiffer iyo muusikada caalamiga sida Rihanna ama Cristina Aguilera. Marka la soo koobo, khabiir ku soo qaadista dareenka jidhka haweenka dusha sare ee sawirrada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » 'Classics', dareenka labiska ee Wakiilka Provocateur